Firenena : Polona
Voïvodie : Voïvodie an'i Lublin
Mponina : 2,800 (2005)
Velaran-tany : 11,3 km²
Faritra internet : lub.pl
Laharan-tarobia : +48 81
Ben'ny tanàna : Stanislaw Wójcicki
Refy Jeografika : 51° 23' N
Seranam-piaramanidina akaiky indrindra: Seranam-piaramanidin'i Okecie
Tranonkalan'ny tanànan'ny Kurów
Tanàna ao atsimo atsinanan'i Polona i Kurów, eo anelanelan'i Pulawy sy Lublin tandrifin'ny renirano Kurówka. Misy mponina manodidona ny 2800 ny tanàna (fanisana 2005).
Nizaka ny zon'ny lalànan'i Magdeburg i Kurów teo anelanelan'ny taona 1431 sy 1442. Amin'ny maha tanàna tsy miankina azy (privée), dia niorenana foaran'ny varotra sakafo sy asa tànana vita avy amin'ny volom-biby ho an'ny manodidona izy. Tamin'ny taonjato faha-XVI izy dia anisan'ireo ivon-toeran'ny Calvinisme, ary hatramin'ny taona 1660 dia nivadi-pinoana tsikelikely ho amin'ny Arianisme ny ankamaroan'ny mponina.
Niharan'ny pesta ny tanàna tamin'ny taona 1670 ka tsy nitondra ny sata maha tanàna mahaleo tena azy nandritra ny fotoana voafetra aloha. Nanomboka teo izy dia nitambarany tamin'ny faritra ambiny manodidona ny tantarany. Taorian'ny fisarahan'i Polona tamin'ny taona 1795, dia niankina tamin'i Aotrisy indray izy. Tafaraka tamin'ny Duché an'i Varsovie izy ny taona 1809 ary nanjary isan'ny fanjakan'i Polona manontolo izy tamin'ny taona 1815. Febroary 1831, nisy ady nitranga teo ka voatosiky ny hery miaramilan'ny jeneraly Józef Dwernicki ny tafika rosiana. Very tanteraka ny sata maha tanàna azy ny taona 1918 ary tafiditra ho isan'i Polona izy hatramin'ny 1918.
Nandritra ny ady fiarovan-tenan'i Polona, tamin'ny fiantombohan'ny Ady lehibe faharoa, ny 9 septambra 1939, dia lasibatry ny fanjerana baomba nataon'ny Luftwaffe-n'ny alemanina ny tanàna. Anisan'ny fotodrafitrasa simba tamin'izany ny hopitaly sivily tao an-toerana (izay nisy ny marika vokovoko mena anefa), ka olon-tsotra maro no namoy ny ainy tamin'izany. Nametrahan'ny alemanina toerana fanaovana asa anterivozona anankiroa ny tanàna. Nisy koa ghetto madinika napetraka eto tamin'ny taona 1942, saingy tafatsoaka ny ankamaroan'ny poloney nogadraina tao ary nikambana tamin'ny hery fanoherana izay niasa tany anatin'ny ala manodidona.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurów&oldid=935253"
Voaova farany tamin'ny 9 Novambra 2018 amin'ny 13:33 ity pejy ity.